जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्नन सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित – Sandesh Munch
Prevयी ४ राशिका हुन्छन् सबै भन्दा धेरै दुश्मन ! कतै तपाई पो पर्नुभयो की ?
Nextअस्पतालमा पेट्रोल बम प्रहार : बिरामीको भागाभाग